How'd it happen and more reports?: မြန်မာ့ပန်းပေါင်းစုံအမည်များ
မြန်မာ့ပန်းပေါင်းစုံအမည်များကို ဒီ ဖေ့ဘွတ်မှာ အများကြီးတွေ့ရလို့ အမှတ်တရသိမ်းထားချင်တာနှင့် ကူးယူဖော်ပြထားတာပါ..https://www.facebook.com/kothetnaing.kothetnaingoo
ချင်းပြည်နယ်ကအပင်လေးများး.."ခေါင်ရမ်းပန်းပန်းရောင်" ..
ရုက္ခဗေဒအမည် Hibiscus spp:
မြေပြန့်မှာတော့ "ခေါင်ရမ်းပင်"လို့ ခေါ်မလားမသိ ဒါပေမဲ့ ဟားခါးတ၀ိုက်မှာတော့ စည်းရိုးပင် အနေနဲ့စိုက်ထားတာပါ၊
မြေပြန့်ခေါင်ရမ်းပန်းက ပွင့်ရင် ငိုက်လျှက်ပွင့်ပေမဲ့ သူကတော့ ထောင်မတ်ပြီး ထီထီးပွင့်တယ် လောလောဆယ်တော့ ပန်းရောင် တမျိုးဘဲတွေ့ခဲ့ ရတယ်၊
တအိမ်နဲ့တအိမ်ကြားကို စည်းရိုးသဖွယ် စိုက်ထား
တော့ မြေပြန့်က "ဗိုလ်ကတော့် မျက်ခုံးပင်" လိုဖြစ်နေတာပေါ့ တောင်ပေါ်ဒေသမှာဘဲ တွေ့ရတဲ့ စည်းရိုးပန်းလေးမို့ ထူးခြားလှပါတယ် ၊
အိမ်ရှင်ဦးကြီးကတော့စိုက်ပျိုးရအရမ်း လွယ် ကြောင်း ကိုင်းချိုးစိုက်ရင်ရှင်ကြောင်း ရှင်းပြရင်း ကိုင်းအရင့်တွေ အများကြီး ခုတ်ပေးပါတယ် ဒါပေမဲ့ ကလေးရောက်တော့ သွေ့ခြောက်
သွားတာပါဘဲ၊ ရာသီဥတုက အရမ်းပူတယ်လေ....
Ref: kothetnaingoo 2014
Beautiful cactus flowers
တကယ်﻿ကိုချစ်﻿စရာ Cactus flowers ﻿လေး﻿တွေ
ချင်းပြည်နယ်ကပင်များ "ပဒိုင်းကြီး" Angel's trumpet. Botanical name: Brugmansia suaveolens cv. A-war. Family Solanaceae. ခရီးထွက်ရင် အပင်တွေကိုစပ်စုတတ်တာ ကျနော့်ဝါသနာပါ။ တချို့ကတော့
ကျနော်နဲ့ခရီးထွက်ရင်စ်ိတ်မရှည်ခြင်ဘူး အပင်တွေ့ရင်ကျန်ခဲ့လို့လေ၊ ဒီအပင်လေးကို ဟားခါးမြို့အမြင့်ဆုံးအရပ်ကရခဲ့တာပါ ။ အဖြူရောင်အပင်ကြီးမျိုးကို ပြင်ဦးလွင်ရုက္ခဗေဒ ဥယျာဉ်ထဲမှာတွေ့ဖူးခဲ့တယ် ။ ခုအပင်က အဝါရောင်ဆိုတော့ မြင်နဲနဲဆန်းနေတာပါ ။ genus species ကတော့ အတူတူပါဘဲ varities သာကွဲတာပါ။ အရိုင်းပင်မဟုတ်ဘဲ အလှစိုက်ပင်ဖြစ်နေတာပါ တွဲလျားကျနေတဲ့ အဝါရောင် ခေါင်းလောင်းပန်းကြီးတွေနဲ့ မြင်ရတာနဲ့ အိမ်အလှ ကိုပိုစေပါတယ်။ ရေမြေကောင်းတာရယ် အအေးဓာတ်ကြောင့် အခြားဒေသကအပင်တွေထက်သန်မာ ထွားကြိုင်းလှတယ် ဒီအပင်က နှစ်ရှည်ခံ ခြုံပင် ကနေ Small tree အထိရှိတတ်ပါတယ်၊ အရွက်တွေက Ovate oblong shape ရှိတတ်ပြီး ရွက်အရင်းကတော့ oblique ရွဲ့နေတတ်ပါတယ်၊ အမွှေးနုများလည်းရှိပါတယ်၊ ပန်းပွင့်က ကြားထွက် ထီးထီးဖြစ်ပါတယ်၊ ပွင့်ဖတ်အုံက tubular ပုံစံပါ ဂလင်းအမွှေးလေးပါပါတယ်၊ Corolla ကတော့ အရောင် ၃ မျိုးလောက်ကိုရှိတတ်ပါတယ် အဖြူ အနီ အဝါ ၃ ရောင်ပါ trumpet shape ရှိပါတယ်၊ ထိပ်မှာ5acumens ရှိနေတတ်တာ လက္ခဏာ တရပ်ပါ ။ corolla tube ကရှည်လျားပြီး တခါတလေ 20 cm ကျော်ပါတယ်၊ stamens ၅ ခု ပါပြီး corolla အတွင်းမှာဘဲရှိနေပါတယ်။ အသီးကတော့ အက်ကွဲသီး capsule ဖြစ်ပြီး အစေ့များစွာပါပါတယ်။ ဒီspecies ကို Kress 2003 က Checklist of Myanmar ထဲမှာ Datura suaveolens အနေနဲ့ဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။ အရိုင်းပင်မဟုတ်သော်လည်း အပွင့်ဝါနဲ့ ဆန်းပြားလှတာမို့ ဟားခါးရောက်ရင်းမှတ်တမ်း တင်ဖြစ်ပါတယ် ရုက္ခဗေဒ ကျောင်းသားသူတွေကိုလည်း သင်ရင်းနဲ့ပေါ့... kothetnaingoo 2014
Posted by Ko Nge at Monday, February 09, 2015
ရွာသာကြီး စိတ်ကျန်းမာရေးဆေးရုံအနီးရှိ မြေဧက ၄၀၀ကျေ...
ပြည်တွင်း ပုဂ္ဂလိက ဘဏ်အချင်းချင်းပဲ ပြိုင်ဆိုင်ကြရလ...
ကိုယ်ပိုင်လုပ်ငန်းတစ်ခုကို Online နည်းပညာတွေသုံးပြ...
ဝမ်းချုပ်နေစဉ် ဆောင်သင့် ရှောင်သင့်သော အစားအစာများ...
ဟင်းသီးဟင်းရွက်များ၏ အင်္ဂလိပ် အခေါ်အဝေါ်များ..
မယ်သီတာရယ် ရာမရယ် ကျွန်တော်ရယ်
MYANMAR: ELECTIONS 2015 – ANALYSIS
ရန်ကုန်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ လေဆိပ်က အပုပ်နံ့ ပျံ့လွင့်...
The Heart want What it want?